नायिका रिमा विश्वकर्मा विवाह बन्धनमा – YesKathmandu.com
काठमाडौं, १० असोज । नायिका रिमा विश्वकर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । आईतबार ह्यात रिजेन्सी होटलमा पारिवारिक जमघटकावीच उनको विवाह सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली मुलका बेलायती नागरिक रोबर्ट विश्वकर्मासंग उनको विवाह सम्पन्न भएको छ । जीवनको सुरुवाती दिनमा संचारकर्मीको रुपमा कार्यरत रिमाले आफ्नो पहिचान भने मोेडलिङबाट बनाएकी थिइन् । उनको रोवर्टसंग सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत चिनजान भएको थियो । त्यही चिनजानलाई उनले आज विवाहमा परिणत गरेकी छिन् ।
विवाह पछि आफ्नो काम केहि हप्ताको लागी स्थगित गरेपनि आफु पुन मोडलिङ क्षेत्रमै फर्किने रीमाले जनाएकी छिन् । रीमाले आजै साँझ आफन्त र फिल्म क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई ह्यात रिजेन्सीमा पार्टी दिने भएकी छिन् ।
सोमबारदेखि इन्धनमा कोटा प्रणाली लागू हुने
One thought on “नायिका रिमा विश्वकर्मा विवाह बन्धनमा”
भरत गैरे दाङ्ग says:
congratulation Reema .
अभिनेत्री खुश्वु ओलीको कोसेलीमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भिलेन !
सार्वजकि भयो समानुपातिक प्रदेशसभाबाट निर्वाचित सांसदको नामावली
ज्यामिरगढीमा अदृश्य शक्तिले ढुङगा बर्सायो,स्थानीयबासी आतङकित